Olee otú iji tọghata WTV ka DVD effortlessly
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata WTV ka DVD
Ị na-achọ ụzọ kasị mma iji tọghata WTV ndekọ faịlụ ka a ọkọlọtọ DVD diski maka playback na a mgbe TV ọkpụkpọ? Bụrụ otú ahụ, ọgụgụ isi WTV ka DVD Ntụgharị - Wondershare DVD Onye Okike, bụ nhọrọ kasị mma maka gị.
A na ngwa-eme ka ọ dị nnọọ ngwa ngwa na mfe n'ihi na gị ike a ọkachamara-na-achọ DVD diski. Ị nwere ike ngwa ngwa ka a jụụ DVD menu n'ihi na ị DVD, n'ihi na ị na-nyere na nza nke DVD menu ndebiri site a usoro. Ọzọkwa, ị pụrụ n'ike n'ike dezie ma retouch gị videos na ọtụtụ kemfe video edezi ngwaọrụ, sịnụ, akuku, ịkpụ, bugharia, ịgbanwe video ìhè / iche / saturation, wdg The apa ọkụ usoro maka a DVD nwere ike okokụre ole na ole dị mfe nzọụkwụ. Dị nnọọ na-eso nduzi n'okpuru iji tọghata WTV ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 mbubata gị WTV videos a oké WTV ka DVD burner
Mbubata WTV faịlụ a usoro maka DVD ọkụ, i nwere ike iji ihe ọ bụla otu n'ime atọ ụzọ:
Kpọmkwem pịa "+ Import" button na a usoro ekpe window na-agagharị na kọmputa gị na diski ike na Ibu Ibu WTV faịlụ na ị chọrọ ka ọkụ.
Alternatively, ị nwere ike see-acha anụnụ anụnụ gburugburu button, na mgbe ahụ na mmapụta submenu, họrọ "Tinye Files ..." nhọrọ.
Mepee nchekwa na e dere gị WTV faịlụ, họrọ ndị na ị chọrọ, mgbe ahụ ịdọrọ ha n'ime nke a ngwa-ekpe ebi ndụ.
1. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ọzọ utu aha jikwaa videos mma, ị nwere ike pịa bọtịnụ "Tinye aha" na ala nke a window.
2. mata otu n'ime video ị chọrọ wee pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window, otú i nwere ike ịgbanwe video usoro. Rịba ama na video usoro na-anọchi anya maka play iji.
3. Pịa Dezie nhọrọ na onye ọ bụla video item mmanya, ị ga-banye video edezi window, ebe i nwere ike ịgbanwe video ìhè, iche, saturation, na olu, bee ọ bụla nke nke video, enlarge ọ bụla na ihuenyo nke ebe video na ndị ọzọ.
Ke "NchNhr" window, slide ala mmịfe na-agagharị na niile DVD menu ndebiri, ma họrọ ọkacha mmasị gị otu. (Cheta: Pịa green ala akụ bọtịnụ. Ị ga-enweta ihe free DVD menu ndebiri.) Na nke a template, i nwere ike tinye thumbnails, buttons, ederede, ndabere image / music wdg hazie gị onwe gị DVD menu.
Mgbe ahụ, ịhụchalụ dum oru ngo ke "Preview" window. Ọ bụrụ na ọ na-afọ ju, ị pụrụ ịmalite na nzọụkwụ ọzọ. Ma ọ bụ, dị nnọọ laghachi hazie gị DVD menu ma ọ bụ dezie gị videos ọzọ.
3 Ọkụ WTV ka DVD
Fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski n'ime kọmputa gị si diski mbanye. Mgbe ahụ, tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ na see "Ọkụ" button ke "Ọkụ" window. Ozugbo, a na ngwa ga-amalite na-ede gị WTV videos ka DVD diski. Ozugbo ọkụ usoro ga fọrọ, na kọmputa ga-iwepụ ụda writen DVD diski.
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị size nke mmepụta faịlụ dị n'elu DVD nchekwa ikike, a ngwa ga-mpikota onu ya dabara na DVD disck-akpaghị aka.
Olee otú iji tọghata WTV ka MKV
Olee otú Ọkụ MP3 ka DVD na Wondershare DVD Creator
Olee otú iji tọghata VRO ka DVD